Faa'iidooyinka Raadinta Siyaasadaha Insurance Online
Internet ayaa pervaded khuseeya kasta oo nolosha aadanaha iyo dhaqdhaqaaqa, iyo waxa ay noqotay aalad Mucjizaad cad u hagaajinta nolosha aadanaha iyo guulaha dhaqaale. Dadka samayn cayn kasta ah oo ganacsi la qiyaasi online, and it has become a great resource for executing many ...Read More
Haddii aad hawlo ganacsi oo internetka ku qabaneysa macluumaad badan oo xasaasi ah oo xog maaliyadeed oo ka wakiil ah macaamiisha iyo dadka isticmaala aad, markaas waxaad u baahan tahay in la caymis haakarisku xada macluumaadka ammaanka. You could expose the financial information of your users ...Read More
Mar walba waxa fiican in la qiimeeyo wax farogelin caymiska iyo shirkadaha ka hor si ay u iibsato caymiska. You invest in insurance policies because you want to protect your future and the next minute from any eventualities that might upset your life and that of ...Read More
Dhibaatooyin caadi ah oo Kac Iyadoo Gudbinta ee Insurance Claims
Caymiska waa wax qof kasta waa in ay leeyihiin meel sababtoo ah ilaalinta ay bixiyaan, laakiin waxaa jira dhibaatooyin yar in uu mararka qaar ka kac la xiriirta heshiiska siyaasad caymiska, inta badan goobaha ay ka soo codsiga magdhow. Some of these common problems are highlighted ...Read More
Ma jiro wax caymis - aad ku soo qaato, sababtoo ah aad fahamsan tahay caymiska iyo faa'iidooyinka, ama aadan adiga oo aan siin hoot ah naftaada iyo qoyskaaga ku saabsan. If you have ever been involved in some accident and your insurance ...Read More
Siyaabaha Badbaadi Naftaada ka Insurance ay kagaartay
Caymiska waa wanaagsan oo loogu talagalay in lagu ceymiska ka ixtimaalka ka war qabin ilaaliyo, laakiin ceymiska ee qasdin wuxuu isu keeni karo in khatarta dhaqaale ka wakiilada caymiska iyo shirkadaha aan u hore ogaaday ilaa uu soo gaaray kagaartay. Many people fall prey to insurance frauds on ...Read More